ကျနော့်အမြင်အရ DesdeLinux ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတကယ်တမ်းဘာတွေကူညီပေးသလဲ။ | Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | GNU / Linux များ
အရာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား, DesdeLinux သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ကွန်ယက်ကိုအထောက်အကူပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အမြင်အားသူ့အားစတင်ရှင်းပြခဲ့သည်။
4 ကောက်ချက်ချရန် ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်အဆန်းများ၊ အသစ်အဆန်းများနှင့်စပ်စုလိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ဆောင်းပါးများကိုထုတ်ဝေသောဝက်ဘ်ဆိုက်အနည်းငယ်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူများအတွက်သာမကအဆင့်မြင့်သောအသုံးပြုသူများအတွက်လည်းထုတ်ဝေသည်။ ကွန်ယက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ပရိုဂရမ်မာများအတွက်ဆောင်းပါးများစွာလည်းရှိသည်။ ထင်မြင်ချက်ဆောင်းပါးအတော်များများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသည့်အပြင်၎င်းတို့သည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုဖိတ်ခေါ်သည့်အပြင်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ distros များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောဆောင်းပါးများကိုလည်းသူတို့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခဲ့သည်
ထို့ကြောင့် DesdeLinux သည်ပရိသတ်အားလုံးနီးပါးအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်ဖြစ်စေ၊ သူသည်ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူ၊ အဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူ၊ ကွန်ယက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်မာများဖြစ်စေ၎င်းတို့သည်ဆောင်းပါးဖြစ်စေ၊
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲသတင်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်တွင်သတင်းနှင့်သတင်းများကိုထုတ်လွှင့်သောဆိုဒ်များများစွာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်၊ သို့သော်…အမည်များနှင့်စကားပြောကြပါစို့
မင်းသတင်းဖတ်ချင်ရင် အလွန် linux နောက်ဆုံးသတင်းများကိုအမြဲထုတ်ဝေသောဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်စစ်တည်းဖြတ်သူများ၏ကိုယ်ပိုင်အရသာသည်အမြဲတမ်းသူတို့၏ကောက်ချက်ဆွဲခြင်းနှင့်ဘက်မလိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ရမည်။အစဉ်အမြဲပို့စ်တွင်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်, MuyLinux အတွက်ပေမယ့်အားလုံးဆိုဒ်များအတွက်ပါလိမ့်မယ်) ကျွန်တော်တို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
သင်ခန်းစာများသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာများနှင့်သတင်းများအကြားမျှတမှုကိုတွေ့လိုလျှင်၊ Linux သုံးရအောင် ဒါဟာခြောကောင်းတစ် ဦး option ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့သူတို့မကြာသေးမီကလုပ် Bash အကြောင်းကိုရေးသားချက်များ3ရန် Elav ချစ်တယ်🙂
ထိုအခါငါဆိုဒ်နှစ်ခုသာဖော်ပြခဲ့တယ်သံသယမရှိဘဲသတင်းထုတ်ဝေရန်များစွာသောများစွာသောရှိပါတယ် ... နှင့်, ယေဘုယျအားဖြင့်, အစဉ်မပြတ်, ဆိုဒ်များအားလုံးနီးပါးအတွက်တူညီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ် ... ကောင်းစွာထွက်လာစေခြင်းငှါသတင်း ဘုရားရေ! Ubuntu ကို!, WebUpd8, Mark Shuttleworth ၏ဘလော့ဂ်၊ အင်္ဂလိပ်တစ်နေရာရာ၊ ဒါကြောင့် ... ငါတကယ်သတင်းများတင်သောအခြား site တစ်ခုဖြစ်ခြင်းအတွက်အဓိပ္ပာယ်သိပ်မရှိဘူး၊ သင်ခန်းစာများ၊ လက်စွဲများ၊ ဟုတ်တယ် ... ဦး စားပေးရမယ်။ ထုတ်ဝေရန်ဆိုဒ်များပိုလိုအပ်သည် တူညီသောသတင်းမဟုတ်, ဟုတ်တယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာများ, tools တွေကို။
ငါသည်လည်းမှမှတ်ချက်ပေးသည် ရဲစွမ်းသတ္တိကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့သော ၁၀ လကကဲ့သို့သောသေးငယ်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းမရှိသည့်ထို site မဟုတ်တော့ကြောင်း၊ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖတ်ရှုသူများစွာရှိသည်၊ မှတ်ချက်ထွက်ရန်အခက်အခဲရှိသည့်သုံးစွဲသူများသည်မှတ်ချက်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုဖော်ထုတ်ရန်ရှိသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ တကယ်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော၊ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများဖြင့် site ကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်ကြွယ်ဝစေရန်။
ငါတို့မှာaForo လူတိုင်းကသူတို့ပြproblemနာကိုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်၊ X application ကပြသတဲ့အမှားကိုရှင်းပြပါ။ လူတိုင်းကလုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားတဲ့နည်းနဲ့အကူအညီပေးလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီပြwhoနာရှိနေတဲ့အသုံးပြုသူကိုကူညီနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုသိတဲ့ငါတို့အားလုံးကူညီလိမ့်မယ်။ ကြောင်းပြproblemနာ။
ထည့်မပြောပါနှင့် al IRC၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အတက်ကြွဆုံးအရာမဟုတ်သော်လည်းကောင်းသောအချိန်များအမြဲရှိသည်
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့ဆောင်တွေမဟုတ်ဘူး၊ ဒီထက်အများကြီးနည်းပေမယ့်ဒီဟာက X အခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့အများကြီးကူညီပေးတယ်၊ တွစ်တာ
En ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter အကောင့် (@fromlinuxကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုခုမေးသူမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို၊ သင်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးမည့်အဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့သိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မသိလျှင်၊ သင်၏မေးခွန်းကို RT ထက်ပို။ ပေးမည်။ နောက်လိုက်များ၊ လူပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော်တို့သည်သင်၏မေးခွန်းနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုဖတ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးကူညီလိမ့်မည်ဟုသင့်အားအာမခံသည်။
DesdeLinux space သေးသေးသေးသေးသေးသေးသေးသေးသေးသေး။ သေးငယ်သည့်အာကာသအတွင်း၌ဖွဲ့စည်းခဲ့ေသာ်လည်းထူးကဲေသာအသိုင်းအဝိုင်းသည်ယခုပင်ခိုင်ခံ့ေသာအချက်ဖြစ်ပါသည်။
သောရှုထောင့်တစ်ခုမှာ ရဲစွမ်းသတ္တိ ဝေဖန်မှုများ၊ FromLinux တွင်လူတိုင်းရေးနိူင်သည်၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်သူ့ကိုကျွန်ုပ်နားလည်သော်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာသူမှားသည်ဟုထင်ပါသည်။
၎င်းကိုရှင်းပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ ဦး စွာသိထားရမည်။ DesdeLinux ဆိုတာဘာလဲ။
FromLinux (ခေါ်: <° Linuxကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်သတင်းအချက်အလက်၊ သတင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေနိုင်သော site တစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ထက်ကား၎င်းသည်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောအခမဲ့ဆော့ဝဲလ် (သို့) OpenSource နှင့်ဆက်စပ်သောအတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီအချက်ကိုရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်၊ လူအနည်းငယ်ကသာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဗဟုသုတကိုမျှဝေမယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုအချက်များရှိပါသလဲ။ ဘလော့ဂ်၏အစမှာကျွန်တော် (el လဗ်နဲ့ကျွန်တော်) ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၌အရည်အချင်းရှိတယ်လို့ထင်သောသုံးစွဲသူများအားစာရေးဆရာဖြစ်နိုင်ခြေကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောင်းပါးများရေးသားခြင်းကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာခွင့်ပြုထားသော်လည်း ... မှတ်ပုံတင်ထားသောမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုသူတို့၏ဗဟုသုတကိုမျှဝေနိုင်သည် ဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရခဲသောအရာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအသုံးပြုသူများအားထို site နှင့်ရပ်ရွာနှင့်ပူးပေါင်းရန်ထိုအခွင့်အရေးကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဒါကကျနော်တို့ကရေးသားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရှိသည်ပုံဖြစ်ပါသည် တီနာတိုလီဒိုငါတို့သူငယ်ချင်း Icarus Perseus, nano ဒီမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်း၊ သူ Manuel ရံဖန်ရံခါကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းသောပို့စ်များနှင့်အလွန်ရှည်လျားစသည်တို့ကိုပေးသည်သော်လည်း
သို့သော်ဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဤတွင်ရေးသားခဲ့သူ၊ များစွာသောများစွာသောအသုံးပြုသူများ၊ သင်ခန်းစာများ၊ ပုံပြင်များစသည်တို့ကိုပါ ၀ င်ခဲ့ကြပြီး၊ ဆိုက်ပေါ်တွင်သာမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြသည်။သင်၏ဘဏ်အကောင့်၏ nick, email, password နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ် ... HAHAHA !!! ဟားဟား!!) နှင့်ထို့ထက်ပို။ ဘာမျှမ။
ငါစကားပြောဆိုမှု၏ရလဒ်ကိုပြောပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါဟာဆီလျှော်သည်။ ငါသာငါ့အငြင်းပွားမှုများ LOL မလုံလောကျဖြစ်ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။
အမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုများ၊ တိုင်တန်းမှုများ၊ သံသယများ၊ အတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များအားလုံးသည်ကြိုဆိုပါတယ်။ အားလုံးကအမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။
စကားမစပ်, သင်ပြိုင်ပွဲ၌ဤ site ကိုများအတွက်မဲပေးလိုလျှင် ၂၀၁၂ ဘလော့များကျနော်တို့ very အလွန်ကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်
ဒီအမျိုးအစားအတွက်အမျိုးအစားကိုရွေးပါ နည်းပညာဘလော့ဂ် y ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးဘလော့ဂ်ငါတို့ကိုတကယ်ကူညီလိမ့်မယ်🙂
ဒီဝေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ စိတ်နှလုံးထဲကနေပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများတွင်အလွန်မပါ ၀ င်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာပို့စ်များ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » ကျနော့်အမြင်အရ - DesdeLinux ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတကယ်တမ်းဘာတွေကူညီပေးသလဲ။
72 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကျနော့်အမြင်အရ DesdeLinux ဟာရပ်ရွာကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။ မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့အလုပ်ကြောင့်ငါ Linux နှင့် OpenSource နဲ့ပတ်သက်ပြီးသံသယများစွာကိုဖြေဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာငါဝန်ခံရမည်။
သူတို့ဆက်ပြီးကြီးထွားလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ငါနည်းနည်းလုပ်တော့မယ်၊ ဒီ site ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖတ်။ ဤတွင်ရပ်တန့်နေသူအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်လည်း Linux မှဖြစ်သည်
ပြီးတော့ဒီဟာတွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘလော့ဂ်များကိုဝင်ရောက်ချင်တဲ့အရူးနှစ်ယောက်ရဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုအနေနဲ့စတင်ခဲ့တာပါ .. ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 😉
LMDE xD နှင့်ပတ်သက်သော Elav ၏ post ကိုမနေ့ကဖြစ်သကဲ့သို့၎င်း၏ဘလော့၏ elavdeveloper xD တွင် ၄ င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏အစိတ်အပိုင်း ၄ ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်မှတ်မိသေးသည်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသူကပြောတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်များစွာအထောက်အကူမပြုသော်လည်းမှတ်ချက်မပေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းရှိနေသည်။ အလွန်ကောင်းသောအလုပ်! နှင့်ငါတို့နှင့်မျှဝေအရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 🙂
ဟားဟားဟားဟုတ်ကဲ့၊ LMDE တွေအများကြီး ... ဒီ distro ဟာဖြုန်းတီးသွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူပြောမလဲ။ ... Re: ငါကဆိုပါတယ်!
ငါဒီနေရာကို elav မှကျေးဇူးတင်စကားရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကငါ Debian အသုံးပြုသူဖြစ်စဉ်ကသူ၏ဘလော့ဂ်နောက်သို့လိုက်သောကြောင့်, ငါဘလော့ဂ်အကြောင်းအရာနှင့်ဆောင်းပါးများအောင်၏လမ်းအတွက်နှစ် ဦး စလုံးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ချင်ကြောင်းစှဲခဲ့ပုံကိုဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ desdelinux ဟာသုံးစွဲသူများအတွက်အသုံးပြုသူများပြုလုပ်သောဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ့ကိုအရင်ကတည်းကသိကျွမ်းခဲ့တဲ့အသုံးပြုသူတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရလို့အရမ်းနှစ်သိမ့်မှုပါပဲ။ ဤအရာ၏အကြီးမားဆုံးကျေနပ်မှုမှာကျွန်ုပ်ရေးသားသောအရာသည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်အကျိုးရှိသည်ကိုသိခြင်းဖြစ်သည်။
အကြှနျုပျ၏ချစ်လှစွာသော Elav နှင့် KZKG ^ Gaara ။
ငါရေးချင်သည်ဆိုသော်ငြားအချို့နေရာများအပြင်ဘက်တွင်ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမနှစ်သက်ခဲ့ပါ။ သို့သော်ဤ site ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ထိုကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ကိုချိုးဖျက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လမ်းလျှောက်ရာတွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်သူတို့အားလုံးနှင့်မျှဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏သမိုင်းနှင့်ပွင့်လင်းသောပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ရှားမှုသည်ကြွယ်ဝပြီးမတူကွဲပြားသည်။
ဒီအာကာသရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတို့ရဲ့မှတ်ချက်များ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားဝေငှ။ စွန့်ခွာသွားသောအသုံးပြုသူများအားလုံး၏သင်၏တည်ရှိမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ထိုအခါငါတို့အဘို့အ, ဒီမှာငါ့အမိ ​​haha ​​သမိုင်းသေးငယ်တဲ့အပိုင်းရှိသည်ဖို့ပျော်မွေ့သည်, ယနေ့ငါတို့အသုံးပြု, ဝေဖန်သို့မဟုတ်ခုခံကာကွယ်သောအရာမှအဘယ်ကနေသိရန်အမြဲကောင်းတယ်😉
မင်္ဂလာပါ။ ဒီမှာပထမဆုံးအကြိမ်မှတ်ချက်ပေးတာပါ၊ ဘာလို့အရင်ကမလုပ်ခဲ့တာလဲမသိဘူး။ ငါ Linux ကိုစတင်ကတည်းက ၆ လရှိပြီ။ အမှန်တရားကငါအရမ်းစိတ်သက်သာရာရစေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အမှားရဲ့တစိတ်တပိုင်း (ကျွန်ုပ်၏သိချင်စိတ်အပြင်) ကျွန်ုပ်သည် Linux ကိုပြောင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ဒီဟာက "GNU / Linux နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ" ဆိုတာငါရှာဖို့သွားခဲ့တဲ့ပထမနေရာမဟုတ်ပါ။ ဒီနေ့သေခြင်းတရားအတွက်ငါ linuxero ပါ။ ငါချစ်တယ်၊ သက်သောင့်သက်သာရှိတယ်၊ အရာရာတိုင်းကိုငါ့ရဲ့အမြင်ပြောင်းသွားတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့နေ့တိုင်း FromLinux ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးဒီ Linux လောကအကြောင်းကိုကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အရာများစွာရှိနေသေးပေမယ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဥရုဂွေးမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။ သင်၏အလှူငွေများအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
စကားမစပ်၊ mac eh ကိုကျွန်တော်မသုံးပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် SolusOS တွင်ရှိသော်လည်း၊ ငါ Midori browser နှင့်အတူရှိနေသကဲ့သို့ Mac hehej Greetings ကိုထပ်မံခံစားနေရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
Gaara ပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောတူတယ်။ စာဖတ်သူတွေကိုအကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုပြီးသူတို့ကိုအားပေးတဲ့အချက်က DesdeLinux ဟာဘာကြောင့်ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံး Linux နှင့် Free Software ဆိုဒ်များဖြစ်လျှင် (အကယ်၍ မဟုတ်) လူကြိုက်အများဆုံး) စပိန်ဘာသာနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်ုပ်သည်ပါဝင်ခွင့်ရသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည့်ရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနားမှနှုတ်ခွန်းဆက်သ !!
အဖြစ်မှန်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးသို့မဟုတ်မဖြစ်ရန်ကြိုးစားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးသားချက်များသည်များစွာသောလူတို့၏အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးသို့မဟုတ်မဖြစ်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်သမျှပရိသတ်များထံရောက်ရှိရုံမျှသာဖြစ်သည်။
သငျသညျသူ့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းသွားကြသည်မဟုတ် ......... ..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!! မဲအတွက်တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ * - *
ငါကသူတို့ကိုလပေါင်းများစွာလိုက်လျှောက်နေတယ်ဆိုတာငါပြောနိုင်တယ်၊ ငါမှတ်ချက်တွေအများကြီးမထားပေမဲ့တစ်ယောက်ချင်းစီကိုဖတ်တယ်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အဓိကစာမျက်နှာများဖြစ်လာမည့်၊ ဘရောင်ဇာကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ပထမဆုံးပေါ်လာသည့် tabs တစ်ခုသို့ရောက်သွားသည်။
ငါသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများအတွက်သာမကသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်၊ ရိုးသားစွာအရမ်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သိသောသုံးစွဲသူများ (အတော်များများ) သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖတ်ပြီးမှတ်ချက်မပေးသော်လည်း၎င်းတို့သည်ရပ်ရွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသည်၊ လူတိုင်းကိုကျွေးမွေးသည်။
ဆိုက်တစ်ခု၏အစတွင်ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းရှိခဲ့သောအရာများ (သင်လိုချင်လျှင်အိပ်မက်ဟုခေါ်ပါ) အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရရှိရန်တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းတွင်သင်သည် Ubuntu သို့မဟုတ် Gentoo ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ လူတိုင်းခံစားရသည်ဟုခံစားရသောနေရာတိုင်း၌သက်သောင့်သက်သာရှိသည်။ အတူတူ (သူတို့ဖြစ်ကြသည်!), GNU / Linux ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
GNU / linux ကမ်ဘာပျေါတှငျစကားပွောရနျ၊ xD
အလွန်ကောင်းတဲ့ KZKG ^ Gaara, ဒီဆောင်းပါးသည်ဘလော့နောက်လိုက်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပရိတ်သတ်များမှာဒီပွင့်လင်းတဲ့နေရာမှာအတူတူကြီးထွားလာမယ် "Linux ကနေပိုကောင်းအောင်သင်ယူပါ" နဲ့ဆက်ဟောပါ၊ သင့်မှာသစ္စာရှိပရိသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ရွှင်လန်း!
ဟုတ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမဆိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသတိရရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်လူတိုင်း၏နေရာဖြစ်သည်၊ အနည်းငယ်မျှသာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏တင်ပို့ချက်အချို့ကိုဒီဆိုဒ်တွင်ထုတ်ဝေခွင့်ပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေနပ်မိပါသည် နားထောင်နေတဲ့တစ်ခုကတော့ IRC တစ်နေ့ elav ကငါ့ကိုဘာလို့ FromLinux ဆိုင်းဘုတ်ကိုပြောပြတယ်။
ငါ <O FromLinux သည် ppa's စီမံကိန်းများရှိသည့် webupd8 ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာတစ်ခုဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းကြားတွင်စီမံချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အဆိုပြုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသင်းတစ်ဖွဲ့အနေနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၌တည်၏။
<°ဆောင်းပါးတော်တော်များများကကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ငါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ထုတ်ဝေသူများငြီးငွေ့စရာမလိုဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့စဉ်ဘလော့ဂ်မှာဖတ်စရာအသစ်တစ်ခုရှိနေသည်။
PPA's နှင့်အခြားသူများအကြောင်းအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည် hahahaha ပရိုဂရမ်မာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးကိုအလွန်နှစ်သက်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်မာ LOL ကိုများစွာအထောက်အကူမပြုနိုင်ဟုခံစားမိသည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် DesdeLinux တွင်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေရန်နေရာတစ်ခု၊ လေးစားမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ distro နှင့် Linux လောကအကြောင်းတန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မကြာမီကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ဖူးသမျှတွင်အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်ဖြစ်လာပြီးနေ့စဉ်ဖတ်ရှုလေ့လာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ဝါသနာကတစ်နေ့တာကိုထုတ်ဝေမှုအသစ်တစ်ခုမပါဘဲဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုမြင်သောအခါကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ဟားဟား
အပြင်, ဒီအာကာသကြီးမြတ်မိသားစုဖြစ်လာသည် !!!
ဟုတ်သည် !!! 😀
သင်ခန်းစာတွေထက်ပိုပြီးတော့၊ ငါထင်မြင်ချက်ဆောင်းပါးတွေကိုရိုက်ပြီးမီးလျှံသည်လက်နက်ရှိသည်ကို !!!
ငါသည်လည်းတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သောအရာနှင့်ကျွန်ုပ်အခြားမှတ်ချက်များအတွက်မှတ်ချက်ပေးသောအရာမှာဒီနေရာမှာ trolls တွေမပေါ်သေးဘူး။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆောင်းပါးများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောကြိုက်တယ်။ ငါတကယ်ချစ်ပါတယ် ထိုအခါငါဘလော့ဂ်အားငါပေးနိုငျသောအကောင်းဆုံး "ချီးမွမ်း" တစ်ခုမှာမှတ်ချက်များကို post ကိုသူ့ဟာသူကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာ (ထင်မြင်ချက်ဆောင်းပါးများတွင်သာအဓိကအား, ဒါပေမယ့်မသာ) သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ၎င်းသည်အသိုင်းအဝိုင်းကောင်းတစ်ခု၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘာစီလိုနာမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည် (သင်သိသည်နှင့်သူတို့ကအနည်းဆုံးတိုက်ကြီး ၂ ခုတွင်ဖတ်ပြသည်။ )
ဟုတ်ကဲ့ haha၊ ဒီ post ကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး တည်းမှရေးထားတာဖြစ်ပေမဲ့၊
ငါကိုယ်တိုင်အကြံပေးချက်အသစ်တွေသင်ယူခဲ့ကြပြီး၊ အသုံးပြုသူတွေကျွန်တော့်ရဲ့စာမူတွေထဲမှာထားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်များကြောင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ကောင်းကျိုး၊ စုပေါင်းအသိပညာဗျ။
Yoyo ဖာနန်ဒက် ဟုသူကပြောသည်
ငါရှည်လျားသောကာလကနေ ... elav ဆိုလိုတာကပြောင်သောလူကိုငါသိ၏နှင့် Pardus Life နှင့်သူ၏ဘလော့ဂ် KDEero ထံမှ Gaara ။ သူတို့မပြောသေးဘူးလို့ငါဘာပြောနိုင်သလဲ။ Deb Linux သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့သူတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ Linux ကိုသုံးပြီးကတည်းကငါဆိုလိုတာကနာမည်တွေအတူတူပဲ။
ဟားဟားဟာမင်းရဲ့နာမည်ကိုအစကတည်းကကူးလိုက်တာအခုမင်းသတိထားမိလား။ … JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA !!!!!
KZKG ^ Gaara နှင့် Elav တို့၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဘလော့ဂ်သို့ကျွန်ုပ်ကျူးဘားဆိုက် (GUTL) တွင်တွေ့ခဲ့သော SWL နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ထောက်ခံမှုဖိုရမ်၌ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဤတွင် ၀ င်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်၊ ငါ IRC ကိုလှည့်ပတ်နေ့တိုင်းနီးပါးနားလည်သဘောပေါက်, ငါဆောင်းပါးများကိုဖြတ်သန်းသွားနှင့်အခါအားလျော်စွာငါ့ကိုယ်ပိုင်အချို့ထားခဲ့ပါ
PS: တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ဆောင်းပါးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကောင်းပြီ။ ငါ့ကိုဘယ်သူခေါ်လာလဲမင်းသူတို့ကိုအပြစ်တင်ခိုင်းတာ။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ မင်းရဲ့ရဲရင့်မှုနဲ့ရဲရင့်မှုကချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပါ။ Kheage ဟာငါအရင်ကရေးခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်းမင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်စရာအများကြီးရှိတယ်။ ပြီးတော့ငါရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲသတ္တိကအရာ အကယ်၍များ ဒီနေရာမှာလူအများစုကဘာမှမသိရပေမယ့်ဒီနေရာမှာသိတဲ့သူတွေကစာရေးတတ်ကြတယ်၊ သင်ယူနိုင်တယ်၊ မကောင်းတာဘာမှမတွေ့ရဘူး။
ဟားဟားဟားဟားငါဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာငါ HAHA ကိုနားလည်တယ်။
ကောင်းပါပြီ၊ ခင်ဗျားကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုကျွန်တော်သိပြီးကတည်းကသူတို့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်စရာမလိုဘဲတစ်ရက်မျှကုန်လွန်သွားခြင်းမရှိပါ။
ငါနှစ်သက်သောအရာတစ်ခုမှာဆောင်းပါးတစ်ခုစီ၏အရည်အသွေး၊ တည်းဖြတ်သူများ၏လန်းဆန်းစေသည့်အမြင်၊ သုံးစွဲသူများအကြားလေးစားမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် / သို့မဟုတ်အယ်ဒီတာများအကြားကျွန်ုပ်တို့စာဖတ်သူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! 😀
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်လူထုအသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသာဖြစ်ရန်မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန်၊ သုံးစွဲသူများနှင့်မျှဝေရန်အမြဲတမ်းကြိုးစားသည်။ လာပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မိသားစုကြီးမိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် !! မင်းရဲ့အချိန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့မင်းရဲ့ဗဟုသုတကိုမျှဝေဖို့အတွက်ငါဒီမှာအများကြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ SinceLinux ဟာအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်စွယ်စုံကျမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
hahahahaha ငါစွယ်စုံကျမ်းကိုမစဉ်းစားပါ။ သို့သော်အသုံးပြုသူများအားလုံးသက်သောင့်သက်သာရှိသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကျေနပ်ပါသည်။
သူက“ ငါ့ငြင်းခုံမှုတွေမလုံလောက်ဘူးလို့ပြောရင်ပဲငါပြောလိမ့်မယ်” ဟုပြောသောအခါသူ၏နောက်ဆုံးဝါကျ KZKG ^ Gaara နှင့်ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ ၎င်းသည် Courage အားရှုံးနိမ့်သောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ Linux သည်၎င်းကိုခုခံကာကွယ်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်သည်။
ဟားဟား၊ ငါ DesdeLinux ကိုခုခံကာကွယ်တာမဟုတ်ပေမယ့် DesdeLinux ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ငါတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆိတ်သငယ်ကသူတို့ကိုနားမလည်သေးဘူး။
ငါပြောနိုင်တာကတော့ Linux မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ LMDE အတွက်အကြံဥာဏ်များရှာဖွေခြင်းကြောင့် DesdeLinux နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်။ အကယ်၍ မှန်ကန်စွာမှတ်မိပါက၎င်းသည်ဖော်ပြထားသော Elav ဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအသစ်သောအရာများ၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့်အခြားသူများကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးလာသည်။ ငါအထူးသဖြင့် KZKG ^ Gaara နှင့် Elav တို့အားသူတို့၏ဆောင်းပါးများမပါသောအမှန်တရားမှာအကြိမ်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုအတူတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်လေ့လာခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုမှာပါ ၀ င်သူအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Elav အတွက်ရောကျွန်ုပ်အတွက်ပါ (နှင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားတည်းဖြတ်သူများအတွက်ပါ) ကျွန်ုပ်သည်ဤနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသိရှိခဲ့သည့်အရာများအားသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတကိုဝေမျှနိုင်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူများအတွက်ဖြစ်ရခြင်းအတွက် ၀ မ်းသာဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြီးတော့ ... ဒါကငါတို့အပေါ်မှာမူတည်တယ်၊ LOL အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ။ 😀
ငါကြာမြင့်စွာ (ငါဘယ်လောက်သိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ), သငျသညျကိုတွေ့မြင်, သငျသညျကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမျှပေမယ့်ဘာမျှမပေမယ့်မကြာသေးမီကသည်အထိငါဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်, အမှန်တရားငါနှင့်အတူပူးပေါင်းနိုင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်အရာအချို့နှင့်အခြားဆောင်းပါး, ငါတကယ်ရေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဆောင်းပါးတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ရပ်ရွာကိုတစ်ခုခုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါးများမှတစ်ဆင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုဝေငှနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူတိုင်းသည်မတူညီသောစကြ ၀ isာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်းဖြတ်သူများကဘာပြောထားသည်ကိုအမြဲဖတ်လိုကြသည်။
site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်တစ်ခုခုရေးရန်, ဒီမှာသင် link ကိုတွေ့လိမ့်မည် https://blog.desdelinux.net/wp-admin/
မည်သည့်သံသယသို့မဟုတ်မေးခွန်းမဆိုကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်အားဝမ်းမြောက်စွာကူညီပေးပါမည်။ kzkggaara [ARROBA] desdelinux [POINT] net
ကျွန်ုပ်သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလက်ရှိဒီဇိုင်းမပေါ်မီကတည်းကဖတ်ရှုပြီးဖြစ်သည်။ ငါနေ့တိုင်းဝင်ပြီးငါကနေအရာများစွာကိုသင်ယူ, ပြိုင်ပွဲထက်နီးပါးပို။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုတစ်ခုခုအထောက်အကူပြုစေချင်တယ်။ ငါလက်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်။ ငါကအဆင်သင့်ဖြစ်ရမယ်၊ အသိုင်းအဝိုင်းကိုပေးတဲ့အရာတွေကိုအသိုင်းအဝိုင်းကိုပြန်ပေးရမယ်။
မင်းလိုလူတွေဟာ Linux ကိုကောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်။ မင်းရဲ့အပ်နှံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ဒီဇိုင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်၊ တကယ်တော့အဲဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လတုန်းကဒါမှမဟုတ် ၂ လ HAHAHA ဖြစ်တဲ့အခါ။
စကားမစပ်၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုဂုဏ်ပြုလွှာ ... မင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးတွေ၊ အထူးသဖြင့်ကွန်ယက်တွေနဲ့ဆာဗာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ပဲ have
ငါကအစွန်းရောက်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုမတိုင်မီရည်ညွှန်းခဲ့သည်, ငါထင်, အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါ့မှာကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းရှိနေပြီ။ အရာအားလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စစနေပြီ။
SinceLinux သည်စပိန်ဘာသာဖြင့် Linuxera အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောတက်ကြွကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
သင် MuyLinux ဟုအမည်တွင်သောကြောင့် Let's UseLinux ... Linux နှင့် Open Source ကမ္ဘာ၏ရည်ညွှန်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးသားမှုကိုရေးသားခြင်းသည်မကောင်းပါမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်ဤအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အခြားအရာတစ်ခုကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်သည်။ ငါအဲဒီမှာထားခဲ့တာ ...
တကယ်တော့ကျွန်ုပ်သည်ယခုလက်ရှိရည်ညွှန်းဆိုဒ်များအကြောင်းပြောဆိုရန်အသင့်တော်ဆုံးမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ RSS အားလုံးနီးပါးသို့မဟုတ် tags များဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စပိန်ဘာသာရှိသောကမ္ဘာပေါ်ရှိများစွာသောဆိုဒ်များကိုအများအားဖြင့်မဖတ်ပါ။ ) သို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ဂြိုလ်များ၊ သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဘလော့ဂ်များသို့မဟုတ်ထိုအရာနှင့်တူသည်။
ငါ MuyLinux ကိုငါသိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကငါသူတို့နောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့လို့ Linux ကိုသီးခြားနေရာတစ်ခုအဖြစ်သုံးကြစို့။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့လေးစားမှုကိုရထိုက်တယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် ... ငါ“ repipi” ဖြစ်ချင်တယ်၊ ဖိုရမ်တွင်“ မင်း” ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ငါဖတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ “ မင်း” သည်အသံထွက်မပါဘဲရေးထားခြင်းဖြစ်သည် (အခြားသူမရှိသောကြောင့်၊ ) မှားသွားတယ်
ဟားဟား !! 😀
ဆုံးမ for မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😉
Haaaa, ငါ့မိသားစုကြီး linuxra, အမှန်တရားကတော့ငါဒီနေ့ Linux မပါဘဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ တစ်နေ့မှာငါဘလော့ဂ်အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးမယ်လို့ nano ကိုကတိပေးခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကငါရေးစေချင်တယ်၊ !!! ရှိပြီးသား FromLinux အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!!!!
hahahahaha ထို့နောက်ပေါ်လာ! ကျနော်တို့ကဒီ post ကိုစောင့်ဆိုင်းနေ ... LOL!
ရယ်စရာကောင်းတာက elav နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘ ၀ ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများ FromLinux ကိုလှည့်ပတ်နေတယ်၊ ​​ငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာဒီလိုမျိုးပဲ hope
ကျွန်ုပ်တို့ပျောက်နေသည်မှာတစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ gimp နှင့် inkscape အကြောင်းပိုမိုသင်ခန်းစာများသာမကစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုများ၊ အခြေခံစံနှုန်းများနှင့်အနည်းငယ်မျှသောဆောင်းပါးများဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ Gimp နဲ့ Inkscape အကြောင်းလည်းဒီမှာဖတ်ချင်တယ်။ ဒီ hehe အကြောင်းနည်းနည်းထပ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ Elav သူကဒီပရိုဂရမ်တွေကိုလွှမ်းမိုးထားသူဖြစ်တယ်။
အခြေခံစံနှုန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်လိုသော်လည်းအဆုံးတွင် X သို့မဟုတ် Y အကြောင်းပြချက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုမလုပ်ခဲ့ပါ
ကျနော့်အမြင်အရ linux အကြောင်းတခြား blogs တွေလိုပဲဘာတွေကအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာသေချာတာပေါ့။
ဘလော့ဂ် linuxmexico ၏ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် desdelinux သည်ငါ့ကိုနေရာချပေးသည်။
ကောင်းပါပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီစာအုပ်ထဲမှာလုပ်ဖို့သဘောတူပုံရတယ်၊ ငါဒီ site ကိုအချိန်အတန်ကြာလိုက်နာတယ်၊ မင်းကမင်းတို့အားလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုပြောဖို့လိုတယ်။
ငါ Let's Use Linux ၏ပူးပေါင်းသူ (အလွန်ပေါ့ပေါ့တန်တန်၊ haha) ဖြစ်သည်။ ထိုဘလော့ဂ်နှင့်အတူသင်မှတ်ဉာဏ်များ၊ လှည့်ကွက်များ၊ သတင်းများနှင့်စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သည်“ စံချိန်စံညွှန်းများ” သို့မဟုတ်“ ဟဲဗီးဝိတ်” များကျန်ရှိနေသည်ကိုငါအာမခံနိုင်သည်။ ဘာက Linux လောကကိုရည်ညွှန်းတာလဲ။ ၎င်းတို့သည်ငယ်ရွယ်သောဘလော့ဂ် ၂ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အထင်ကြီးလောက်သောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် Linux နှင့်ပတ်သက်သောကျွမ်းကျင်သူများစွာကအကြံပြုသောပထမဆုံးဘလော့ဂ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအချက်က၎င်းသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ဟုငါထင်သည်။
ငါဒီစာမျက်နှာမှလျှောက်ထားရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာငါကလှည့်ကွက်ယူနှင့်အခြားဆောင်းပါးများနှင့်အတူသူတို့အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်။ ငါ့သိချင်စိတ်ကိုတိုးပွားစေခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😀
ငါပို့စ်တွင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများကဲ့သို့တူညီသောအမှားများကိုမကျူးလွန်ရန်၊ သတင်းနှင့်အခြားသတင်းများကိုသာထုတ်ဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်၊ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့သည်။
ထည့် ၀ င်မှု (အလွန်ကောင်းသည်) ကိုအသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်ပင်နားလည်အောင်လုပ်ထားသည်။ ဖတ်ခြင်းသည်ဖျော်ဖြေမှုနှင့်လုံခြုံမှုမရှိဘဲအခြားနေရာများနှင့်မတူပါ။
ဖာနန်ဒို Monroy ဟုသူကပြောသည်
ဖာနန်ဒို Monroy အားတုံ့ပြန်ပါ
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကြောင့်ဥရောပသည်ယူရို ၄၅၀ ဘီလီယံချွေတာသည်